အိပျပြျောစဖေို့ ဗီတာမငျနှငျ့ အာဟာရဓာတျမြား | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
မနကျအစောကွီး ၂ နာရီရောကျနပွေီး အိပျရာထဲ တလူးလူး တလိမျ့လိမျ့နဲ့ ဒီဆောငျးပါးကို ဖတျနရေပွီဆိုရငျတော့ ညအိပျမပြျောဖွဈတာ ငါ တဈယောကျတညျး မဟုတျဘူးဆိုတာလေး သိထားပေးပါနျော။ အမရေိကနျလူမြိုး ၅၀ ကနေ ၇၀မီလီယံလောကျဟာ ညအိပျမပြျောတာလိုမြိုး အအိပျရောဂါတဈမြိုးမြိုးကို ခံစားနရေတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ကာလကွာရှညျ ညအိပျမပြျောခွငျးဟာ ရရှေညျအတှကျ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ တဈနကေို့ ည ၇ နာရီအောကျပဲ အိပျတာ ကွာရှညျလာရငျ သဆေုံးနှုနျးကို ၂ ဆ တကျနိုငျပွီး တဈညကို ၆ နာရီအောကျပဲအိပျရငျ သဆေုံးနှုနျးက ၄ ဆ တကျနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ညအိပျမပြျောတာဟာ အခုခတျေကာလမှာ ကွုံတှရေ့တဲ့ အကွီးဆုံးရောဂါတဈမြိုးလိုတောငျ ဖွဈနပေါပွီ။
ဒါတှဟော စိတျဖိစီးမှုမြားတဲ့လူနမှေုပုံစံ၊ အလုပျခြိနျအပွောငျးအလဲတှနေဲ့ အိပျရာထဲ ဖုနျးသုံးတာတှကွေောငျ့တငျ မကပါဘူး။ မကွာမကွာ မနေ့တေတျကွတဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုက ဗီတာမငျခြို့တဲ့ခွငျးပါ။ အိပျရေးကောငျးကောငျးဝဖို့အတှကျ ဗီတာမငျနဲ့ အာဟာရဓာတျတှေ ပွညျ့ဝဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ဗီတာမငျစီဟာ ခုခံအားစနဈအတှကျ အရေးပါတယျဆိုတာတော့ သိကွပမေယျ့ အိပျရေးဝဖို့ပါ အရေးပါကွောငျး မသိကွတာမြားပါတယျ။ ဗီတာမငျစီ ခြို့တဲ့သူတှဟော အအိပျပွဿနာကိုပိုကွုံရတတျပွီး ညဘကျမှာ ပိုပိုနိုးနတေတျကွပါတယျ။ ခဉျြတဲ့အသီးလေးတှေ စားပေးခွငျးဖွငျ့ ဗီတာမငျစီဓာတျကို ရယူပါ။
သံဓာတျဟာ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးကို အောကျစီဂငျြရောကျရှိဖို့ အရေးပါပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သံဓာတျခြို့တဲ့တဲ့အခါ လူက နုံးနတေတျတာပေါ့။ သံဓာတျခြို့တဲ့တဲ့အခါ restless leg syndrome ဆိုတဲ့ ညဘကျအိပျခြိနျ ခွထေောကျက တရှရှဖွဈပွီး လှုပျခငျြတဲ့ရောဂါတဈမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ သံဓာတျပွညျ့ဝအောငျ သံဓာတျပွညျ့ဝတဲ့ အစားအသောကျတှေ စားတာ၊ သံဓာတျအားဆေး သောကျတာမြိုး လုပျပေးနိုငျပါတယျ။
မဂ်ဂနီစီယမျဟာ အိပျစတေဲ့ဟျောမုနျး မယျလတိုနငျထုတျလုပျမှုမှာ အရေးပါပါတယျ။ ကွှကျသားတှကေို ဖွလြေော့ပေးနိုငျတဲ့အပွငျ အမိုငျနိုအကျဆဈ GABA ထုတျလုပျပေးမှုကွောငျ့ အာရုံကွောစနဈကိုလညျး ပွလြေော့စနေိုငျပါတယျ။ မဂ်ဂနီစီယမျကို တဈနကေို့ ၆၀၀ မီလီဂရမျလောကျ သောကျပေးသငျ့တယျဆိုပမေယျ့ ကြောကျကပျ ပကျြစီးနသေူတှေ၊ နှလုံးခုနျ တအားနှေးနသေူတှမှောတော့ မသောကျသငျ့ပါဘူး။ ဒီအစား မဂ်ဂနီဆီယမျ ကွှယျဝတဲ့ အစိမျးရောငျအသီးအရှကျတှေ၊ ဖရုံစတှေ့ေ စတာတှေ စားပေးပါ။
ဗီတာမငျဘီ12 ဟာ အာရုံကွောနဲ့ သှေးအားဆဲလျတှအေတှကျ မရှိမဖွဈ လိုအပျပွီးတော့ ခန်ဓာကိုယျမှာ စှမျးအငျဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဗီတာမငျဘီ12 ခြို့တဲ့ခွငျးကွောငျ့ နုံးခွငျး၊ အိပျရေးပကျြခွငျး၊ ထုံထုံကဉျြကဉျြဖွဈခွငျး စတဲ့ နောကျဆကျတှဲ အမြားကွီး ဖွဈလာတတျပါတယျ။
လလေ့ာသူတှကေတော့ ဗီတာမငျဒီ လြော့နညျးခွငျးဟာ အိပျရေးမဝခွငျးနဲ့ ဆကျစပျနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ တဈနတေ့ာ ဗီတာမငျဒီ လိုအပျခကျြက ၆၀၀ IU လောကျ ရှိတယျဆိုပမေယျ့ ခန်ဓာကိုယျဟာ နရေောငျနဲ့ ထိတှမှေ့သာ ဗီတာမငျဒီကို ထုတျလုပျနိုငျပွီး အစားအသောကျကနရေယူဖို့ ခဲယဉျးပါတယျ။ ဗီတာမငျဒီ မြားလှနျးရငျလညျး ဝမျးခြုပျတာ၊ ပြို့တာအနျတာ၊ ကြောကျကပျ ကြောကျဖွဈတာတှဖွေဈနိုငျလို့ တဈနတေ့ာ လိုအပျခကျြကို ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျဖို့ လိုပါတယျ။
ကယျလျဆီယမျ ခြို့တဲ့ခွငျးဟာ အိပျမကျမကျတဲ့အိပျခြိနျဖွဈတဲ့ REM အိပျခြိနျကို ထိခိုကျနိုငျကွောငျး သိရပါတယျ။ ကယျလျစီယမျပမာဏ ပုံမှနျပွနျရောကျတဲ့အခါ ပုံမှနျ REM အိပျခြိနျကိုပွနျရတယျလို့ လလေ့ာမှုတှအေရ သိရပါတယျ။ နို့နဲ့နို့ထှကျပစ်စညျးတှေ၊ ကိုကျလနျ၊ မုနျညငျး၊ ဆာဒငျးနဲ့ နှမျးစတှေ့ကေ ကယျလျစီယမျပမာဏကို တကျစနေိုငျပါတယျ။
7. အိုမီဂါ3ဖကျတီးအကျဆဈ
အိုမီဂါ3ဖကျတီးအကျဆဈဟာ နှလုံးနဲ့ဦးနှောကျအတှကျကောငျးတဲ့ အဆီတဈမြိုး ဖွဈပါတယျ။ တခြို့လလေ့ာမှုတှမှော အိုမီဂါ3ဟာ အိပျရေးဝဖို့အတှကျလညျး အရေးပါတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဆယျလျမှနျလိုမြိုး အဆီမြားငါးတှမှော အိုမီဂါ3တှေ အမြားကွီးပါပါတယျ။
မနက်အစောကြီး ၂ နာရီရောက်နေပြီး အိပ်ရာထဲ တလူးလူး တလိမ့်လိမ့်နဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်နေရပြီဆိုရင်တော့ ညအိပ်မပျော်ဖြစ်တာ ငါ တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေး သိထားပေးပါနော်။ အမေရိကန်လူမျိုး ၅၀ ကနေ ၇၀မီလီယံလောက်ဟာ ညအိပ်မပျော်တာလိုမျိုး အအိပ်ရောဂါတစ်မျိုးမျိုးကို ခံစားနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကာလကြာရှည် ညအိပ်မပျော်ခြင်းဟာ ရေရှည်အတွက် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ည ၇ နာရီအောက်ပဲ အိပ်တာ ကြာရှည်လာရင် သေဆုံးနှုန်းကို ၂ ဆ တက်နိုင်ပြီး တစ်ညကို ၆ နာရီအောက်ပဲအိပ်ရင် သေဆုံးနှုန်းက ၄ ဆ တက်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ညအိပ်မပျော်တာဟာ အခုခေတ်ကာလမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အကြီးဆုံးရောဂါတစ်မျိုးလိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒါတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့လူနေမှုပုံစံ၊ အလုပ်ချိန်အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ အိပ်ရာထဲ ဖုန်းသုံးတာတွေကြောင့်တင် မကပါဘူး။ မကြာမကြာ မေ့နေတတ်ကြတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက ဗီတာမင်ချို့တဲ့ခြင်းပါ။ အိပ်ရေးကောင်းကောင်းဝဖို့အတွက် ဗီတာမင်နဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ပြည့်ဝဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်စီဟာ ခုခံအားစနစ်အတွက် အရေးပါတယ်ဆိုတာတော့ သိကြပေမယ့် အိပ်ရေးဝဖို့ပါ အရေးပါကြောင်း မသိကြတာများပါတယ်။ ဗီတာမင်စီ ချို့တဲ့သူတွေဟာ အအိပ်ပြဿနာကိုပိုကြုံရတတ်ပြီး ညဘက်မှာ ပိုပိုနိုးနေတတ်ကြပါတယ်။ ချဉ်တဲ့အသီးလေးတွေ စားပေးခြင်းဖြင့် ဗီတာမင်စီဓာတ်ကို ရယူပါ။
သံဓာတ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို အောက်စီဂျင်ရောက်ရှိဖို့ အရေးပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် သံဓာတ်ချို့တဲ့တဲ့အခါ လူက နုံးနေတတ်တာပေါ့။ သံဓာတ်ချို့တဲ့တဲ့အခါ restless leg syndrome ဆိုတဲ့ ညဘက်အိပ်ချိန် ခြေထောက်က တရွရွဖြစ်ပြီး လှုပ်ချင်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သံဓာတ်ပြည့်ဝအောင် သံဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေ စားတာ၊ သံဓာတ်အားဆေး သောက်တာမျိုး လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မဂ္ဂနီစီယမ်ဟာ အိပ်စေတဲ့ဟော်မုန်း မယ်လတိုနင်ထုတ်လုပ်မှုမှာ အရေးပါပါတယ်။ ကြွက်သားတွေကို ဖြေလျော့ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အမိုင်နိုအက်ဆစ် GABA ထုတ်လုပ်ပေးမှုကြောင့် အာရုံကြောစနစ်ကိုလည်း ပြေလျော့စေနိုင်ပါတယ်။ မဂ္ဂနီစီယမ်ကို တစ်နေ့ကို ၆၀၀ မီလီဂရမ်လောက် သောက်ပေးသင့်တယ်ဆိုပေမယ့် ကျောက်ကပ် ပျက်စီးနေသူတွေ၊ နှလုံးခုန် တအားနှေးနေသူတွေမှာတော့ မသောက်သင့်ပါဘူး။ ဒီအစား မဂ္ဂနီဆီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့ အစိမ်းရောင်အသီးအရွက်တွေ၊ ဖရုံစေ့တွေ စတာတွေ စားပေးပါ။
ဗီတာမင်ဘီ12 ဟာ အာရုံကြောနဲ့ သွေးအားဆဲလ်တွေအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ စွမ်းအင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဘီ12 ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် နုံးခြင်း၊ အိပ်ရေးပျက်ခြင်း၊ ထုံထုံကျဉ်ကျဉ်ဖြစ်ခြင်း စတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အများကြီး ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
လေ့လာသူတွေကတော့ ဗီတာမင်ဒီ လျော့နည်းခြင်းဟာ အိပ်ရေးမဝခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်နေ့တာ ဗီတာမင်ဒီ လိုအပ်ချက်က ၆၀၀ IU လောက် ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ နေရောင်နဲ့ ထိတွေ့မှသာ ဗီတာမင်ဒီကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး အစားအသောက်ကနေရယူဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီ များလွန်းရင်လည်း ဝမ်းချုပ်တာ၊ ပျို့တာအန်တာ၊ ကျောက်ကပ် ကျောက်ဖြစ်တာတွေဖြစ်နိုင်လို့ တစ်နေ့တာ လိုအပ်ချက်ကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လိုပါတယ်။
ကယ်လ်ဆီယမ် ချို့တဲ့ခြင်းဟာ အိပ်မက်မက်တဲ့အိပ်ချိန်ဖြစ်တဲ့ REM အိပ်ချိန်ကို ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ကယ်လ်စီယမ်ပမာဏ ပုံမှန်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ပုံမှန် REM အိပ်ချိန်ကိုပြန်ရတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေအရ သိရပါတယ်။ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ ကိုက်လန်၊ မုန်ညင်း၊ ဆာဒင်းနဲ့ နှမ်းစေ့တွေက ကယ်လ်စီယမ်ပမာဏကို တက်စေနိုင်ပါတယ်။
7. အိုမီဂါ3ဖက်တီးအက်ဆစ်
အိုမီဂါ3ဖက်တီးအက်ဆစ်ဟာ နှလုံးနဲ့ဦးနှောက်အတွက်ကောင်းတဲ့ အဆီတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့လေ့လာမှုတွေမှာ အိုမီဂါ3ဟာ အိပ်ရေးဝဖို့အတွက်လည်း အရေးပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆယ်လ်မွန်လိုမျိုး အဆီများငါးတွေမှာ အိုမီဂါ3တွေ အများကြီးပါပါတယ်။